T-WORK HOSTING PLAN - T-WORK SYSTEM
သင့် ကိုယ်ပိုင် Website များ လွှင့်တင်ရန် လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ နေရာ တစ်ခုရှာနေပါသလား..?
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့ပြီး (၅) နှစ်တိုင်တိုင် ရပ်တည်ခဲ့သည့် T-Work System မှ
-လုံခြုံမှုမြင့်မားသော Virtual Private Server များ
– Web Server အား Digital Attacks များမှကာကွယ်ရန် AI နည်းပညာ အသုံးပြုထားသော Immunify 360
-Domain-Validation Certificate ပါဝင်ခြင်း
-Data များထိန်းသိမ်းရန် လွယ်ကူစိတ်ချရသော Cloudlinux နှင့် Plesk များ ပါဝင်သည့် Web-Hosting Service များ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါတယ်လိုအပ်ချက်များအပေါ် စိတ်ကျေနပ်ပြည့်ဝသည့်အထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ပြည်တွင်း Company တစ်ခုပါ။အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ နည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီများ၊ Freelance IT ပညာရှင်များစွာတို့နှင့် လက်တွဲပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပြီး လုံခြုံမှုမြင့်မားသော Web-Hosting Service များ ရရှိနိင်စေရန် ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပါပြီStay Home ကာလမှာ ကိုယ်ပိုင် Website များ ဖန်တီးလွှင့်တင်လိုသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ဈေးနှုန်းသင့်တင်သော Web-Hosting Plan များFreelance Web-Developer များအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရပြီး အထူးသင့်လျော်သော Web-Hosting Plan များ။အောင်မြင်သောလုပ်ငန်းရှင်များ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လုံခြုံမှုမြင့်မားသော Web-Hosting Plan များ အထူး ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုအနေနဲ့ မည့်သည့် Plan ကိုမဆို ဝန်ဆောင်မှုရယူသူတိုင်းအား Web Template Service များ ထပ်တိုး ဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်မည့် Plan များဖြစ်တာကြောင့် အသေးစိတ်ကြည့်ရှု့ပြီး ငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်
1. T-Work 1GB Plan (10,000ks Per Month) -1GB RAM -20GB SSD Storage -Share CPU -Unlimited Email -Email Span Filtering Service -1 Domain -2 Database -Secured by Imunify360 -Powered by CloudLinux and Plesk -1 SSL DV Certificate
2. T-Work 2GB Plan (20,000ks Per Month) -2GB RAM -40GB SSD Storage -Share CPU -Unlimited Email -Email Span Filtering Service -2 Domain -2 Database -Secured by Imunify360 -Powered by CloudLinux and Plesk -1 SSL DV Certificate
3. T-Work 4GB Plan (40,000ks Per Month) -4GB RAM -80GB SSD Storage -Share CPU -Unlimited Email -Email Span Filtering Service -4 Domain -4 Database -Secured by Imunify360 -Powered by CloudLinux and Plesk -1 SSL DV Certificate
4. T-Work 8GB Plan (80,000ks Per Month) -8GB RAM -160GB SSD Storage -Share CPU -Unlimited Email -Email Span Filtering Service -8 Domain -8 Database -Secured by Imunify360 -Powered by CloudLinux and Plesk -1 SSL DV Certificateလုံခြုံစိတ်ချရပြီး ဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်သော ကျွန်ုပ်တို့ T-Work System မှ Web-Hosting Service များကိုနှစ်အလိုက် ရယူနိုင်ပါပြီသင့် ကိုယ်ပိုင် Website များ လွှင့်တင်ရန် ကျွန်ပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပါ
ဆက်သွယ်ရန် HotLine:09-965 088114
T-WORK SYSTEM Co.,Ltd , No (14/1), 79th Street, between 39th Street and 40th Street, Maharaungmyae Township, Mandalay.
← T-WORK HOSTING PlAN